जीवनमा पाँच अंकको महत्व, पृथ्वी र चन्द्रमा मै अंक रहस्य
ज्ञानमित्र, चैत्र १५, २०७५
कल्पना गर्नुस अंकको ज्ञान अथवा खोजी नभएको भए मनुष्यताको हालत के हुन्थ्यो ? अंकको ज्ञान नभएको भए गणितको जन्म नै हुने थिएन । र, अब कल्पना गर्नुस गणितको जन्म नभएको भए मनुष्यता कुन सोपान हुन्थ्यो ? विकासवादको अवधारणा मैले मात्र...
इन्द्रेणीका सातै रंग धोका मात्रै हुन, अर्थात यो आप्टिकल इल्यूजन हो
ज्ञानमित्र, चैत्र १४, २०७५
भारतले स्याटेलाइट खसाल्यो,बन्यो संसारको चौथो महाशक्ति
तपाईंको मुटु कत्रो ?
नेपालीमा एउटा भनाइ छ मुटु ठूलो हु्नुपर्छ । तर, यसको आशय पक्कै आकारसँग सम्बन्धित होइन होला । शरीरमा मुटु रहने निश्चित स्थान छ । त्यो स्थानमा मुटु च्यापिएर रहने गर्छ । आकारमा ठूलो भएको मुटुलाई शरीरमा अतिरिक्त कुनै स्थान पाउने...
सरोज ज्ञवाली, चैत्र १२, २०७५
सपना हामी सबैले देख्ने गर्छौं । भनिन्छ सपना मानिस मात्रले होइन जनावरहरु पनि सपना देख्नेगर्छन् । केही व्यक्तिहरुलाई सपना भित्र पनि अर्को सपना देखेको अनुभव हुन्छ । हुन सक्छ यो अनुभव भ्रम मात्रै होस । तर, यसै धारणालाई समेटेर क्रिस्टोफर...
हात्तीजत्रो जिब्रो भएको प्राणी
ज्ञानमित्र, चैत्र ११, २०७५
समुद्रको पानी पिउनुभएको छ ? छ भने तपाईंलाई स्वाद थाहा होला । समुद्रको पानीको स्वाद यस्तो किन हुन्छ ? समुद्रमा एउटा माछा पाइन्छ, यसलाई ब्लु ह्वेल भनिन्छ । नर ब्लु ह्वेलले माछासँग सम्भोग गर्दा झण्डै १८० लिटर वीर्य निष्कासित गर्छ...
विराट अंकः मान्छेलाई गन्न असहज, विज्ञानलाई सहज
ज्ञानमित्र, चैत्र १०, २०७५
प्रिय भाइ विकेश, तिम्रो फोटो पत्रको अन्य प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आज म अणु (MOLECULES) कसरी बन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन गइरहेको छु । ध्यान दिएर पढ । यस प्रश्नमाथि चिन्तन गर्दा म तिम्रो प्रश्नको ठ्याक्कै जवाफ त दिन सक्दिनँ...
‘ओह यो हो कीमिया’
ज्ञानमित्र, चैत्र ९, २०७५
हर्ष र विषादको संयुक्त अनुभूति कस्तो हुन्छ ? कुनै धनपति अथवा राजयुवकलाई शायद हुन्छ पनि होला, पिताको निधनमा । तर म जस्ता मध्यमवर्गीय प्राणीका लागि यी दुवै स्पष्ट विभाजनका साथ बेलामौका जीवनमा आउने गर्छन् । तर आज म यी दुवै...
‘ब्रह्म सत्यम जगतमिथ्या’
ज्ञानमित्र, चैत्र ८, २०७५
शंकराचार्यको महावाक्य ब्रह्म सत्यम जगतमिथ्या दर्शनमा रुचि राख्ने प्रायः सबैले पढेकै हुन्छन् । अद्वैतवादी शंकरले ब्रह्मलाई मात्र सत्य, त्यस बाहेकको समस्त जगतलाई मिथ्या परिभाषित गर्नुभएको छ । साइन्सले जब यो बुझ्ने चरणमा प्रवेश गर्यो, सारा भौतिक वस्तु परिवर्तनशील छन्, केहीको...
काठमाडौंमा पकाएको खानेकुरा निमेषमै अमेरिका पुग्ला ?
ज्ञानमित्र, चैत्र ७, २०७५
२०३० सालको कुरा हो, गाउँबाट अन्दाजी १३१४ वर्षको केटो काठमाडौं आयो । उसले काठमाडौंमा घरको धारामै पानी आएको देख्यो । र, अचम्म मान्यो । किनकि उसले गाउँमा घरमै धारामा पानी आएको देखेको हुँदैन । काठमाडौंको सेवा सुविधा देखेर उसलाई यहीँ...
न्युजिल्याण्ड हत्याकाण्ड: एक दिनअघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो योजना
ज्ञानमित्र, चैत्र ६, २०७५
गत शुक्रबार न्युजिल्याण्डमा ५० भन्दा बढी व्यक्ति एक जनाले हानेको गोलीबाट एक चिहान बन्न पुगे । बन्दुकधारीले यस हत्याकाण्डको फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । ब्रेण्टन टैरण्ट नामक यो आक्रमणकारीले आफूले गरेको हत्याकाण्डलाई उचित पाइला भन्दै फेसबुकमा ८५ पृष्ठ लामो...
स्टिफन हकिन्स भारतमा जन्मेको भए...
मधुसूदन उपाध्याय, चैत्र ५, २०७५
स्टिफन हकिन्सबारे बिबिसी हिन्दीले आफ्नो फेसबुक पेजमा एउटा प्रश्न पोस्ट गर्यो यदि स्टिफन हकिन्स भारतमा जन्मेको भए के हुन्थ्यो ? तमाम फेसबुक प्रयोगकर्ताले यसमा आफ्नो प्रतिक्रिया पोस्ट गरे । पोस्ट गरिएका केही प्रतिक्रियालाई टिप्दै मधुसुदन उपाध्यायले आफ्नो प्रतिक्रिया लेखे ।...
बन्यो टाइम मेसिन
लोकसंवाद संवाददाता, चैत्र ४, २०७५
भौतिक विज्ञानको स्थापित मूलभूत नियम र सिद्धान्तलाई भंग गर्दै रुसका वैज्ञानिकले टाइम मेसिनको निर्माण गरेका छन् । यद्यपि यस टाइम मेसिनमा अहिले धेरै जटिलता रहेका छन् । तपाईंहरूले साइन्स फिक्सन फिल्ममा टाइम मेसिन हेर्नु भएकै होला । फिल्मका विभिन्न पात्रले...
सरोज ज्ञवाली, चैत्र ३, २०७५
लुसी(Lucy) एउटा साईफाई एक्सन मूभी हो जसलाई लुक वेन्सनले निर्देशन गरेका थिए र यसको निर्माण उनको श्रीमती मजेनी वेन्सनले गरेकी थिइन् । यो सिनेमा सन् २०१४ जुलाईमा प्रदर्शित भएको थियो । सिनेमाको लागत खर्च करिब ४० मिलियन अमेरिकी डलर थियो...
पशुपतिनाथमा सुनको महल, देवराजको पाहुना हुनपुगें म
ज्ञानमित्र, चैत्र २, २०७५
तिम्रो जे इच्छा वत्स । यो के हामी त बौद्धनाथमा थियाैं, अहिले बद्रीनाथमा पौ छौँ । जेष्ठ महिना बद्रीनाथमा दर्शनार्थीहरूको घुँइचो छ । शीतकालपछि केही दिनअघि मात्र मन्दिरको कपाट खोलिएका हुन् । सायंकालिन आरतीको बेला भएको छ । प्रमुख मन्दिर...
एच.आई.भी.का दुइटा क्याटोगोरी, एउटाको ढोका थुनिए पनि अर्कोको ढोका अझै खुला
ज्ञानमित्र, चैत्र १, २०७५
गत शनिबारको लेखमा लण्डन प्यासेन्ट र बर्लिन प्यासेन्टलाई कसरी बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गरेर यिनलाई एच.आई.भी. मुक्त बनाइयो भन्नेबारे चर्चा गरियो । बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसनले भाइरस प्रवेश गर्ने सीसीआर ५ जिनोमको संरचना परिवर्तन हुन गएर उपरोक्त दुवै प्यासेन्ट एच.आई.भी. मुक्त भएका...
आज जन्मेका महानतम वैज्ञानिक
लोकसंवाद संवाददाता, फाल्गुन ३०, २०७५
आउनुस्, इतिहासको यात्रामा जाऔं । सन् १९०५ तिरको कुरा हो, एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्ने क्लर्क मनमनै प्रश्न गरिरहेको थियो । प्रश्न थियो, यदि प्रकाशको गति सर्वाधिक २ लाख, ९९ हजार, ७ सय ९२ किमि प्रतिसेकेण्ड छ एवम् यो कन्सटेन्ट...
पृथ्वीको अभूतपूर्व सुरक्षा कवच, वृहस्पति ग्रह नभएको भए हाम्रो जीवन धरापमा हुन्थ्यो
ज्ञानमित्र, फाल्गुन ३०, २०७५
विज्ञान पृथ्वी जस्तो जीवन सम्पन्न हुन सक्ने ग्रहको खोजीमा रातदिन लागि परेको छ । अनेकन वैज्ञानिक टेलिस्कोपबाट आकाशको कुन कुनामा यस सम्भावनाको खोजीमा संलग्न रहदै जीवन नै विताउँछन् । तर आज सम्म पनि पृथ्वी बाहेक अन्यत्र कतै जीवन सम्पन्न ग्रह...
समयको फरक-फरक आयाम, मरेको मानिस पनि अर्को कुनै आयाममा जीवित हुनसक्छ !
सरोज ज्ञवाली, फाल्गुन २९, २०७५
फिल्मको पहिलो दृश्यमा ट्रेन स्पिडले सिकागो गइरहेको हुन्छ । ट्रेनमा रहेकी एक महिला यात्री क्रिस्टिना वारेन आफ्नो पुरुष साथी सेन फेन्ट्रेससँग दिक्क लाग्ने गरी बोलिरहेकी हुन्छिन् । तर, सेन भने उनको कुरा सुन्न चाहँदैन । र, ऊ केही बुझिरहेको पनि...